अनबोर्डिंग प्रबन्धित आईटीको Step चरण प्रक्रिया - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B5B बजार समाचार
नोभेम्बर 18, 2020 नोभेम्बर 18, 2020 शीर्ष मिडिया सेवाहरू ब्लग, व्यापार, विशेष समाचार, प्रेस विमोचन, प्रविधि
धेरैजसो व्यवसायहरूले अब व्यवस्थित आईटी सेवाहरूतर्फ सर्दैछन्। साना व्यवसायका लागि आईटी सेवाहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो र सानो स्तरका व्यवसायहरूले उनीहरूको आईटी विभागलाई आउटसोर्स गर्न सक्छन् ताकि उनीहरूले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नेछन् केहि बढी महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा तिनीहरूलाई तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ।
व्यवस्थित आईटी सेवा प्रदायक खोज्दै र उनीहरूसँग सम्झौता हस्ताक्षर गर्नु भनेको पहिलो कदम मात्र हो। वास्तविक कार्य भनेको एक सहज अनबोर्डिंग प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु हो कि टोली सुरु गर्न र उनीहरूको जिम्मेवारी लिन सक्दछ।
यदि तपाईंले भर्खरैका लागि साइन अप गर्नुभयो लस एन्जलस आईटी परामर्श सेवाहरू र अब व्यवस्थित आईटी टीमको जहाजको प्रक्रिया सुरु गर्न तयारी गर्दै छन्, यो लेख तपाइँको लागि उत्तम स्रोत हुनेछ। चीजहरू सरलीकृत गर्नका लागि हामीले अनबोर्डिंग प्रक्रियालाई पाँच चरणमा विभाजन गरेका छौं।
१. एक टोली बैठकको व्यवस्था:
व्यवस्थित आईटी टीमको अनबोर्डिंग प्रक्रिया सधैं टीम टोलीको बैठकको प्रबन्धबाट सुरू हुन्छ। यो एक बैठक हो जहाँ व्यवस्थित आईटी टीम र व्यवसायका कर्मचारीहरू एक साथ आउँछन् र एक अर्कालाई भेट्छन्। धेरै जसो समय, मानव संसाधन विभाग र व्यापार प्रमुखहरूले आईटी टोलीलाई भेटेका छन्। तर बाँकी कर्मचारी र आईटी टोलीले एक अर्कालाई परिचय गराउन यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
व्यवस्थित आईटी टीममा सामान्यतया दुई प्रमुख व्यक्ति हुन्छन्। इन्जिनियर एक हो जसले आईटी प्रबन्धनको प्राविधिक पक्षहरूको ख्याल राख्छ जबकि वितरण विशेषज्ञ ईन्जिनियर र व्यवसायको बिच सम्पर्कको बिन्दु हो। यी दुबै व्यक्तिसँग भेटको प्रबन्ध गर्नुहोस् र तपाईंको व्यवसाय टोलीसँग औपचारिक परिचय सत्र राख्नुहोस्।
२. सूचना विनिमय:
यो अनुकूलन आईटी समर्थन तुरुन्त काम गर्न सक्दैन। आईटी टोलीमा चल्दा, व्यवसायले सहयोग गर्नुपर्दछ र आईटी टोलीलाई केहि जानकारी प्रदान गर्नुपर्दछ ताकि उनीहरूले व्यापारको हालको रणनीति र आईटी गतिशील विश्लेषण गर्न सक्नेछन्। आईटी टोलीले तपाईंलाई आवश्यक कागजातहरूको सूची प्रदान गर्दछ। यी कागजातहरूले आईटी टोलीलाई कम्पनीको आईटी पूर्वाधारको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ। यदि तपाइँ एक व्यवस्थित आईटी टीमबाट अर्कोमा सर्दै हुनुहुन्छ भने, अघिल्लो टोलीले तपाइँलाई सबै आवश्यक जानकारीहरू समाप्तिमा सारांश प्रदान गर्न सक्षम गर्दछ जुन नयाँ टोलीले उनीहरूको भूमिका र जिम्मेवारी लिन आवश्यक पर्दछ।
Go. लक्ष्य र समयरेखा सेट गर्दै:
दुबै सरोकारवालाहरुका लागि महत्वपूर्ण छ। व्यापार मालिकहरुका साथसाथै अनबोर्डिंग आईटी टोलीले अनबोर्डिंग प्रक्रियाको बखत लक्ष्य र समयरेखा सेट गर्ने काम गर्दछ। ऑनबोर्डिंग आईटी टीमका जिम्मेवारी र कार्यहरू औपचारिक रूपमा परिभाषित छन् र सम्झौताको अंशको रूपमा उल्लेख छन् जुन व्यवसाय र अनुकूलन आईटी समर्थन टीम तर दुबै पक्षहरू सँगै बसेर कार्यका लागि समयरेखा र लक्ष्यहरू राख्नु महत्त्वपूर्ण छ।
कहिलेसम्म कार्यहरू पूरा गर्नुपर्दछ?
कुन कार्यहरू सबैभन्दा बढी प्राथमिकताका रूपमा ध्यान दिनु पर्ने हो?
कुन लक्ष्यहरू व्यवसायको छोटो अवधिको लक्ष्यहरूको रूपमा सामना गर्नुपर्नेछ र कुन कम्पनीको दीर्घकालीन लक्षाहरूमा थपिनु पर्छ?
कुन लक्ष्यहरू सानो चरणहरूमा विभाजित गर्न आवश्यक छ?
यी केहि प्रश्नहरू हुन् जुन व्यवस्थित आईटी सेवा प्रदायकले राम्रोसँग काम लिनु अघि अगाडि राख्नु र छलफल गर्नु पर्छ।
A. साझेदारी विकास गर्दै:
जब व्यवसायले प्रबन्धित आईटी सेवाहरूको लागि छनौट गर्छन्, तिनीहरू आईटी टोली खोजी गर्दैनन सम्पूर्ण आईटी डिपार्टमेन्ट लिनका लागि। बरु, लक्ष्य भनेको कामको लोड साझा गर्नु हो। धेरै जसो कम्पनीहरूले आईटी विज्ञहरूको टिमलाई आफैंको कार्यालयको परिसर भित्र राख्छन् र व्यवस्थित आईटी टोलीले तिनीहरूको भूमिका टाढाको आधारमा हेरचाह गर्दछ।
किनकि यी दुबै टोलीहरू एक साथ जोडिएका छन् र सँगै मिलेर काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, कम्पनीले उनीहरूलाई साझेदार गर्न समय दिन महत्वपूर्ण छ। अनबोर्डिंग प्रक्रियाको बखत, दुबै आईटी टोलीहरू सँगै ल्याइनु पर्छ। तिनीहरू केवल उनीहरू बीचको बरफ पग्लनको लागि भेट्नु हुँदैन तर व्यवसायको लागि अगाडि जाने बाटोको बारेमा छलफल गर्ने प्राविधिक बैठक पनि हुनुपर्दछ। यी दुवै टोलीहरू एकै पृष्ठमा हुनको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ।
Following. पछ्याउँदै र अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्दै:
अनबोर्डिंग प्रबन्धित आईटीको प्रक्रिया छिटो र सानो कार्य होइन। यसलाई केहि समय चाहिन्छ। व्यवस्थित आईटी टीम र व्यापारको अपेक्षाहरू द्वारा प्रदान भइरहेको सेवाहरूको दायरामा निर्भर गर्दै, अनबोर्डिंग प्रक्रियाले केहि दिन देखि हप्ता सम्म कतै लिन सक्दछ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग यस अवधिमा सेवा प्रदायकसँग खुल्ला सञ्चार च्यानलहरू छन्। के भइरहेको छ अपडेटहरू प्राप्त गर्न अनबोर्डिंग आईटी टीमको साथ अनुसरण गर्नुहोस्। यसका साथै उनीहरूसँग कुराकानी गर्नुहोस् कि उनीहरू सहज छन् र अनबोर्डिंग प्रक्रिया ठीकठाक छ। यो टिमलाई सहज महसुस गर्न को लागी आवश्यक छ त्यसैले उनीहरू आफ्नो कार्यको साथ आरम्भ गर्न सक्दछन् र व्यापार बढाउन र अगाडि बढ्न मद्दत गर्दछ।
सांप्रदायिक समाचार आईटी सेवाहरू अनबोर्डिंग आईटी प्रबन्धित
शीर्ष मिडिया सेवाहरू
शीर्ष मिडिया तपाइँको प्रेस विज्ञप्ति CN साइटमा प्रकाशित गर्दछ जुन १ लाख भन्दा बढी वार्षिक भ्रमणहरू प्राप्त गर्दछ र मासिक वृद्धि दोहोरो अंक हो। तपाईको प्रेस विज्ञप्ति देखीनेछ र गुगल एल्गोरिथ्म द्वारा पुर्याइनेछैन किनकि यो बहु स्थानहरूमा प्रकाशित भयो। तपाईं प्रेस विज्ञप्ति लेख्नुहोस्, हामी यो प्रकाशित भएको निश्चित गर्दछौं।
पोम्पीओले इजरायलको भ्रमण गर्ने बित्तिकै इजरायलले सिरियामा सैन्य लक्ष्यहरूलाई आक्रमण गरेको छ
कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा घरेलु हिंसामा वृद्धि